पैसाको रूख - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
पैसाको रूख | Saturdayकलम | Kavyalaya
Background Image Source: Still Life with Airplane from airspacemag
by गणेश पौडेल (भुजुत्ती) August 3, 2019
किरिङ किरिङ – फोनको घन्टी बज्यो।
“हेल्लो…” रमेशले फोन उठायो। केहीबेर रिसिभरमा बजेको आवाज सुन्यो र हतारहतार साइबरतिर लाग्यो। करिब १ घण्टापछि हातभरी लड्डु बोकेर डेरामा फर्कियो। रमेशलाई देखेर साथीहरू दंग परे। साथीहरू भन्दा धेरै दंग देखियो ऊ।
एकै सासमा सुनायो– मैले कोरियन भाषा पास गरेँ।
हुन त तेश्रो पटकको मेहनतमा बल्ल उसको नाम निस्किएको थियो। विश्वविद्यालयबाट डिग्री सकेको भएपनि उसलाई कोरियन भाषा पास गर्न भने निकै सकस पर्यो। निकै पापड बेल्यो उसले।
डिग्री प्रथम डिभिजनमा उत्रीर्ण गर्दासम्म उज्यालो हुन नसकेको उसको मुहारमा एकाएक हर्षका रेखाहरू दौडिन थाले। क्षणभरमै आशाका नयाँ किरणहरू देखा परे। ऊ हर्षले गदगद भयो। चिनेजानेका इष्टमित्रहरूलाई भेला पारेर भव्य हर्कबडाई गर्यो। ऋणपान नै गरेर भएपनि जीवनकालमा कहिल्यै कल्पना नगरेको पार्टी गर्यो।
नाम निस्केपछि गर्नपर्ने मेडिकल चेकअप, पुलिस रिपोर्ट, जब एप्लिकेसन फारम सबै भर्यो। केही दिनमै रोस्टर (योग्यताको सूची) मा नामपनि निस्कियो। ऊ झन् गदगद भयो। तर रोस्टरमा नाम निस्किएको ८ महिनासम्म लेबर कन्ट्रयाक्ट आएन। “सबै प्रकृयाहरू फास्ट ट्र्याकमा भएको लेबर कन्ट्र्याक्ट मात्र किन कछुवाको गतिमा आयो?” उसलाई चिन्ता पर्न थाल्यो। चिन्ता पर्नुको अर्को कारण पनि थियो पार्टी गर्दाको ऋण। पढ्दाको ऋण। घरका ठूलासाना समस्याहरू।
उसलाई रिजल्ट कुर्नभन्दा सयाैँ गुणा बोझिलो भयो श्रम स्वीकृति कुर्दाको छटपटी।
करिब १० महिनापछि रमेशको लेबर कन्ट्रयाक्ट आयो। फेरि ऊ गदगद भयो। क्षणभरमै बिर्सियो पुराना नैराश्यहरू। अहो! कति स-साना कुराले नै मान्छेको ठूल्ठूला खुसी र दुःखको सिमा निर्धारण गरिदिँदो रहेछ।
लेबर कन्ट्र्याक्ट पछिको अभिमुखीकरण तालिम, कम्पनी कन्फर्मेसन, भिषा इस्यु, फ्लाइट सेड्युल सबै प्रकृयाहरू छिटो छिटो पूरा गरेर उड्यो रमेश पैसा फल्ने रूख सम्झँदै अपरिचित दुनियाँमा।
इन्छन विमानस्थलमा झरेपछि उसलाई नेपाली प्रतिनिधिले अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रमा लगे।
मसालेदार खाना खाने बानी परेको रमेशले उमालेको, गनाउने खाना देखेर नाक खुम्च्यायो। फेरि सम्झ्यो – महिनाको लाख कमाई र गाँउमा पाइने इज्जत। वाह ! ऊ लठ्ठ पर्यो। नाथे खानाले किन गल्थ्यो र ऊ? १/२ छाक नाक थुनेरै खायो। पछि बिस्तारै बानी पर्दै गयो।
३ दिने तालिमपछि कम्पनीको प्रतिनिधिले उसलाई कारखाना पुर्‍यायो। बस्नका लागि एउटा कोठा देखाइदियो “भोलिदेखि काम गर्नुपर्छ। आज आराम गर”, प्रतिनिधि आफ्नो बाटो लाग्यो।
भोलिपल्ट बिहानै काममा जाने घन्टि बज्यो। हतारहतार रमेश काममा गयो। कम्पनीमा विदेशी ऊ मात्र रहेछ। कोरियनले उसलाई काम गर्ने ठाँउ र काम गर्ने तरिका सिकाइदियो।
काम गर्ने ठाँउ र गर्नुपर्ने काम देखेर रमेशको हंशले ठाउँ छाड्यो। बर्खाको खहरेले उरालेजस्तै उर्लियो मनमा डरको भेल। ‘अहो ! कति भयानक काम।’ उ थरर काँप्यो। उसलाई त थाहा थियो काम भनेको बाख्रा चराउनु हो। काम भनेको हलो जोत्नु हो। काम भनेको भारी बोक्नु हो। काम भनेको कोदाली खन्नु हो। काम भनेको अनाज रोप्नु हो। उसलाई त थाहा थियो काम भनेको अध्यापन गराउनु हो। काम भनेको अफिसभित्र घुम्ने कुर्सीमा बसेर कलम चलाउनु हो। किबोर्ड चलाउनु हो। काम भनेको ठग्नु हो। काम भनेको ठूलठूला फुई लडाउनु हो।
तर यहाँ त ठिक विपरीत उल्टो पो रहेछ। उसले कल्पना सम्म नगरेको हुँदो रहेछ काम। उसलाई थाहै थिएन काम भनेको पसिना चुहाउनु पनि हो। काम भनेको मेहेनत गर्नु पनि हो। काम भनेको दुःखको खाडल हो। बल्ल उसले आफ्नो बुबालाई सम्झियो। ढाड दुखेर बुवाले रातभरी नसुति ऐया ऐया भनेको दिमागमा खेलिरह्यो। बल्ल उसको मगजमा आमाका फुटेका खस्रा हत्केलाको सम्झना आयो। कराईको मोसो थालमा लागेको देख्दा आमालाई ढंग छैन, सफा सुग्घर नजान्ने भनेर मझेरिमा भात हुर्याएको सम्झियो। गला अवरूद्ध भएर हिक्क हिक्क भयो। सायद सम्झना भनेको यही त होला। प्रेमिकालाई एकैछिन नभेट्दा मिस गरेको याद थियो उसलाई तर, प्रेमिका मिस गरेभन्दा धेरै दुखदायी हुँदोरहेछ घरको याद, आमाको सम्झना।
करिब २६०० डिग्रीको तापक्रममा उम्लँदै गरेको फलामको झोलमा तर परेका खरानी र खियाका कणहरू छान्नु पर्ने रहेछ उसले। काम गर्दा बलको खासै प्रयोग नभएपनि गर्मी भने असाध्यै। मान्छे गुम्सिएर पाके जस्तो लाग्ने। सेफ्टी लुगा, माक्स, हेल्मेट लगाएर काम गर्दा रमेशलाई आगोमै हाम फालेजस्तो हुन्थ्यो। “म आलोकाँचै छु कि पाकिसकेँ?” ऊ बारबार आँफुलाई नियाली रहन्थ्यो।
बेलाबेला सोच्थ्यो – “भो मेसिनको संसार छाडेर भागौं कतै।”
फेरि सोच्थ्यो – “काम बाट त भागौंला तर जिम्मेवारीबाट कसरी भाग्नु? त्यहीमाथि ऋणको भड्खालो पुर्न बाँकी नै छ। कोरियन भाषाको ज्ञान पनि त कम छ उसँग। सयौँ हजारौँ दुःखहरू भुलेर, ज्यानकै माया मारेर करिब ६ महिना त जेनतेन काम गर्यो। घरको ऋण तिर्यो। थाप्लो केही हलुंगो भयो। भाषा पनि धेरै-थोरै सिक्यो। अब त अरूतिर काम खोजेर पनि ज्यान पाल्छु सोचेर काम छोड्ने निर्णयमा पुग्यो।
तर सधैँँ सबैले सोचेजस्तो कहाँ पो हुन्छ र? जिन्दगी भन्नु नै आकस्मिकताको छाल न हो। त्यहीमाथि यो त अर्काको देश। ‘३ वर्ष आफूले भिसा लगाइदिएको र ३ वर्षसम्म जसरी पनि त्यही काम गर्नै पर्ने’ उल्टै उर्दी दियो साहुले। आखिर साहुभन्दा ठूलो को नै पो हुँदो रहेछ र परदेशमा। चुपचाप सहनुको विकल्प भएन।
अब रमेशलाई साहुले हेर्ने नजर फेरियो। स-सानो गल्तीमा पनि किचकिच गर्न थाल्यो। ‘साहुले अह्राएको काम गर्न सक्दिनँ भन्नु गल्ती पो रहेछ। अपराध पो रहेछ।’ बल्ल बुझ्यो उसले।
सोच्दा सोच्दै कयौँपटक उम्लँदै गरेको फलामको झोलमा हाम फालौँ र मरौँ भनेर पनि नसोचेको होइन। तर सकेन। मृत्यु त्यति सजिलो पनि कहाँ छ र? बरू घर परिवारको यादले घिटि-घिटि बचाइराख्यो। फलामसँग फलाम भएरै घोटिइरह्यो। जिन्दगी भनेको घोटिनु पनि त हो। फलाम पनि घोटिएरै न धार लाग्ने हो। —मन बुझायो।
करिब २ बर्षपछि घर जान छुट्टी माग्यो। छुट्टी पनि दिएन साहुले। बरू काम व्यस्तता दुखेसो पोख्यो। थोरै पैसाले मुख बुझो लगाइदियो। थामथुम पार्यो। ‘साहुु र शासक उस्तै रहेछन् दुवैको आदेश पालना गर्नुपर्ने।’
बिस्तार बिस्तार रमेश डिप्रेसन र एक्लोपनको सिकार हुन थाल्यो। उसलाई सम्हाल्ने कोही थिएन। ऊ मानसिक रुपमा मात्रै होइन शारीरिक रुपमा पनि कमजोर हुँदै गयो। बिरामी देखेपछि साहु तर्सियो। नियममा त उपचार गर्नुपर्ने थियो तर साहुले त उल्टै कामबाट पो निकालिदियो। आजकाल को नै समस्यासँग जुध्न चहान्छ र? सबै भाग्ने नै त हुन्। पानी कै गोहो मा त बग्ने हो बालुवा पनि।
ऊ काम छाड्नै चहान्थ्यो। ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाईलग्यो।’ बिराम बिर्सिएर हर्षले गदगद भयो। आवासको लागि नजिकैको चर्चले सञ्चालन गरेको सेल्टरमा पुग्यो। काम खोज्ने ठाँउमा गयो र निवेदन हाल्यो। नोदोङ्बु (काम खोजी दिने सरकारी संस्था) ले ३ महिनाको काम खोज्ने भिसा थपिदियो। ३ महिनामा रमेशले उपचार गर्यो, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त भयो तर निरासाले छोडेन। निरासाको प्रकृति फेरियो। उसले काम पाएन। पाए नै पनि मनलाग्दो थिएन। ३ महिनाको भिसा सकिन लाग्दापनि काम नभेटेपछि चर्चले सञ्चालन गरेको सेल्टरले पनि गनगन गर्न थाल्यो।
बल्ल बल्ल नोदङ्बुबाट म्यासेज आएको एक कम्पनीमा गयो र जस्तो भए पनि काम त्यहीँ गर्न थाल्यो।
काम पहिलेभन्दा सजिलो थियो। अल्मुनियमका पाताहरू प्रेसमा काटेर ससाना कस्मेटिकका बिर्काहरू बनाउनु पर्ने। पैसा पनि राम्रै थियो। नेपाली साथीहरू पनि थिए। रमेशलाई जुनी फेरेजस्तो लाग्यो।
हाँसीखुशी काम गर्न थाल्यो। कम्पनीले भिसा पनि थपिदियो। छुट्टीको दिन हाँसखेल, रमाइलो र घुमघाम। काम बाहेक कोरिया रमाइलो नै थियो। रमेश विगत बिर्सेर नयाँ जीवन जीउन थाल्यो। उसको दिनचार्यमा ढकमक्क गोदावरी फुल्यो।
तर समय सधैँ भनेजस्तै नहुँदो रहेछ। फूल क्षणिक नै त हुन्छ। आखिर जीवन्त हुने भनेका काँडाहरूनै त हुन्। रमेशलाई समयले फेरि धोका दियोे। काम गर्दै गरेको मेसिनको सेन्सरले काम नगरेर प्रेस मेसिन रमेशको दायाँ हातको पाखुरीमा बजारियो। पीडा सहन नसकेर उसले होस नै गुमायोे।
होसमा आँउदा ऊ अस्पतालको बेडमा थियो। यताउति हेर्यो, कोरियन नर्स र डाक्टरहरू थिए। सामुन्नेमा चिनेका कोही थिएनन्। यत्तिकैमा झल्यास्स हात सम्झियो। दाँया हात हेर्यो। ला ! khangranga भयो। कुमदेखि मुनि हात नै थिएन। उसलाई सपना जस्तो लाग्यो तर त्यो विपना नै थियो। यथार्थ तितै त हुन्छ। डाको छोडेर ग्वाँ ग्वाँ रोयो तर रूनुको कारण कसैले सोधेन। न आँशु नै पुछिदिए कसैले। उल्टै गिज्याए “फ्रि मा उपचार हुँदै छ। तँ जिउँदै छस्। मर्दैनस्। किन रून्छस्?”
उसले बुझेन, बुझ्दै बुझेन ‘के मृत्युमा मात्र आँशु झार्नुपर्ने हो?’
ऊ वर्षाैँपछि अहिले पनि बेलाबेला त्यही वाक्य सम्झन्छ र टोलाइरहन्छ “तँ जिउँदै छस्। मर्दैनस्। किन रून्छस्?”
Image Source: moneytree from sovereignman
गणेश पौडेल (भुजुत्ती)